Booranaa Breaking! Kontorbaandistoonni godina Booranaa ilmaan Booranaa kanneen MNO – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsBooranaa Breaking! Kontorbaandistoonni godina Booranaa ilmaan Booranaa kanneen MNO
#Kontorbaandistoonni godina Booranaa ilmaan Booranaa kanneen MNO keessaatti aangoo ol aanoo qaban; kanneen ummataaf quuqaman aangoorra buusuuf Finfinneetti qajeelan!
Guyyaa hardhaa ammoo namoonni kunneen qindoominna Obboo Guyyoo Galgalootin namoota 13 filatanii ; abbootii Gadaa namoota 3 itti dabalanii ,walitti namoonni 16 ilmaan Booranaa kanneen Oromiyaa keessaa jiran; kanneen ummataaf quuqaman aangoorraa buufna jedhanii ka’aniiru. Konkolaataa 2n gara Finfinnee dhufaa jiran; tokko Waajira qonnaa aanaa Yaaballootti kenne. Lammeessoo aanaa Dubluqiitti erge.
Namoonni Haala kanaan gara Oromiyaa dhufaa jiran;
1. Kuraa Jaarsoo _ Abbaa Gadaa
2. Taarii Adii – Abbaa Gadaa
3. Roobaa Jaarsoo – Abbaa Gadaa
4. Diidaa Dooyyoo Guyyoo
5. Galgaloo Diidaa Gobeessaa
6. Shukkunnuu Godaanaa
7. Jirma Taaraa
8. Sokkaaree Godaanaa
9. Huqqaa Mallisee
10. Liiban Salloo Diidaa
11. Mallicha Boottee
12. Jaarsoo Bantee
13. Diidaa Dooyyoo
14. Waaqoo Diidoo
15. Qaraarsa Gurraachaa
16. Jaldeessaa Halakee
Sababni warrii ilmaan Oromoo Booranaa kanneen Oromiyaa keessa jiran Deeggartoota Shanee jennee ; mootummaan yoo akkas jedhanii Obsaa hin qabu; aangoo irraa jissinaa jedhan. Namoonni isaan aangoo irraa jissuuf deeman;
1. Philosopher Guyyoo Dooyyoo
2. Obboo Dheengee Boruu
3. Obboo Liiban Areeroo
Eegaa sababni jarrii Kontorbaandistoonni kunneen ilmaan Oromoo Booranaa kanneen dhiyeenna kana akka carraa MNO keessa galan ariyuuf fiiguuf waan isaan daba ummanni Booranaa dheenga MNO dhufee himate DHUGAA jedhanii haqan furaniif qofa.
Jarreen kontorbaandistoonni kunneen #TPLF waliin hojjachaa akka jiran ummanni godinichaa guutuun ragaa baha!.
Akka karooraa isaaniitti yoo mootummaan jarreen kana aangoorraa buusuu baate;
_ Qeerroo deeggarree karaa cufnaa
_ Shanee deeggarree Bilxiginnaa kuffimnaa
Mootummaan yoo jechoota Kan lamaaniin dhufne gaaffii tokko malee aangoorraa buusaa jechuun kontorbaandistoonni galgala kana Finfinnee seenu.